🌿Little Nook🌿 Preston/Lytham St Annes/Blackpool - I-Airbnb
🌿Little Nook🌿 Preston/Lytham St Annes/Blackpool
Clifton, Lancashire, i-United Kingdom
Inqolobane ibungazwe ngu-Sharon
I-Little Nook iyisibaya esihlukanisiwe esihlukaniswe ekhaya lethu, ama-Nooks amathathu. Emandulo bekuyindlu yezinkukhu. Abekho omakhelwane ngaphandle komhlambi wezinkomo ngakho iyindawo enokuthula, eyimfihlo. Ngasemuva kunobhavu oshisayo futhi kunengadi encane evulekile emaceleni enamabhentshi netafula. Kunokubukwa okumangalisayo okungaphazamiseki kuwo wonke amasimu ukusuka kuvulandi kanye nokubuka phansi komgwaqo ongenela ngefasitela eliyindilinga. Kubusa ukuthula nokuzola. I-SkySports, amasethi amabhokisi kanye ne-Netflix.
Okokuqala kunendawo yokupaka izimoto ezimbili ngaphambi kweLittle Nook.
Kunendawo encane yangaphandle ezansi kolunye uhlangothi lwe-Little Nook okuwumgibe wangempela welanga onamabhentshi netafula elibheke phezu kwamasimu.
Ngemuva kwe-Little Nook kunebhavu eshisayo yezihlalo ezingu-6 enokukhanya kwemizwa nezipikha zomsindo ze-Bluetooth. Kunezinyathelo zokugibela kubhavu oshisayo. Ubhavu oshisayo usebenza izinsuku ezingama-365 zonyaka futhi uhlala ugcinwe kuma-degree angama-40. Kukhona amalambu e-feston alenga ezihlahleni kanye nelambu lokuvikela. Kukhona nekhava yokuvala umoya uma lina.
I-Little Nook ivalekile futhi iyimfihlo kakhulu.
Uma ungena ngomnyango wangaphambili uzofika ephasishi elikhulu elinesitezi esinesitezi, indawo yokulengisa amajazi akho nesibuko esikhulu esiwubukhazikhazi.
Lapha kunekhishi elifakwe isiqandisi sefriji, ihhavini, ihob, i-microwave, ama-barstool amabili netafula elincane. Kuhlinzekwa itiye, ikhofi noshukela. Kunezitsha eziningi, izitsha kanye nekhishi likuhlomele ngokuphelele ukuze ukwazi ukupheka ukudla.
Futhi esitezi esiphansi kunegumbi lokugeza. Amathawula ahlinzekwa ukuhlala kwakho.
Isitezi sokuqala sithatha ubude bendawo yonke. Yinkulu futhi ivulekile ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi kukhona iwindi eliyindilinga elibheke umgwaqo omazombezombe futhi lena 'indawo yokulala' enemibhede emibili nemibhede emibili eyodwa.
Ingxenye emaphakathi yenza itafula lokudlela kanye nezihlalo ezihlala ezine.
Ngakolunye uhlangothi lwesitezi sokuqala sika-Little Nook 'indawo yokuphumula'. Kukhona osofa ababili abakhulu besikhumba, itafula lekhofi kanye ne-TV/DVD eneNetflix, iSkySports neSkyBoxsets.
Phansi komgwaqo omazombezombe kukhona umzila omncane ozungezwe amasimu. Yithina kuphela indawo ekulayini.
Sifinyeleleka kakhulu kwezinye izindawo. Sitholakala phakathi kwemigwaqo engu-A emibili ngakho kukhona izixhumanisi zemizila emihle. Uma ungaphandle ungezwa umsindo wethrafikhi kodwa hhayi uma ungaphakathi kwe-Little Nook njengoba icwebezeliswe kathathu.
4.82 out of 5 stars from 350 reviews
4.82 · 350 okushiwo abanye
Ihlukaniswe nedolobhana elihle laseClifton, isitolo sedolobhana sihamba ibanga elingamakhilomitha angamashumi amabili ukusuka e-Little Nook futhi kunohlaza olukhulu okuhanjwa ngalo nezinja.
Kunokukhethwa okuhle kwamashibhi endaweni yasendaweni engamamayela amabili nokuhamba okuthile okumangalisayo emapaki asePreston, amabhishi aseLytham St Anne's naseSouthport naseLytham Hall.
ILake District, Peak District kanye neManchester neLiverpool zonke zihamba ngehora elilodwa.
Amadolobhana amahle emakethe namadolobhana aseRibble Valley naseBecon Fell angafinyelelwa ngemizuzu engama-30 yokushayela.
Idolobhana laseLytham eligcwele abantu abaningi liyimizuzu eyi-15 uma uhamba futhi lisingatha izindawo zokudlela ezinhle, imigoqo, amathofi nezitolo zokudlela.
Emindenini indawo inezinsiza eziningi zobungane bezingane:-
I-Ribby Hall (ukubhukuda, ukuhamba kwehlathi, ukuhamba ngesikebhe, ithenisi, iSegway, iLasertag, i-Waterwalkerz) iyimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka lapho.
Ukugibela amahhashi e-Wrea Green - imizuzu eyi-10 ukushayela
I-Penny Farm - ipulazi lamahhashi - amamayela ayi-10 kude
IBlackpool Promenade nakho konke okukhangayo - imizuzu engama-30 kude
Ama-Beach Huts e-Lytham St Anne's - imizuzu eyi-15 yokushayela
I-Lytham - imizuzu engu-15 uma ushayela - Ukugibela izintambo eziphakeme ze-Kaos endlini, i-Lytham Hall namagceke, ipaki eliwina umklomelo i-Park View nge-Eco-Pod.
My partner Ralph and I host our own AirBnB. We love to be on the flip side and travel to stay at other unique properties.
Mina no-Ralph sihlala eduze kwase-Little Nook endlini enkulu, i-Three Nooks. Sizoshiya i-Little Nook ivuliwe ukuze ukwazi ukuqala iholidi lakho ngokushesha njengokungathi ikhaya langempela elivela ekhaya.
Sitholakala noma nini kukho konke ukuhlala kwakho nganoma imiphi imibuzo noma izeluleko endaweni yangakini. Siyakuthanda ukuhlangana nezivakashi kodwa ngokufanayo siyazi ukuthi abantu abaningi bafuna ukusala bodwa ukuze bajabulele isikhathi sabo bengekho.
Mina no-Ralph sihlala eduze kwase-Little Nook endlini enkulu, i-Three Nooks. Sizoshiya i-Little Nook ivuliwe ukuze ukwazi ukuqala iholidi lakho ngokushesha njengokungathi ikhaya la…
Hlola ezinye izinketho ezise- Clifton namaphethelo